२२% बोनसमा मूल्य समायोजनपछि नागरिक लगानी कोषको कतिमा खुल्यो सेयर कारोबार ?
ARCHIVE, MARKET WATCH » २२% बोनसमा मूल्य समायोजनपछि नागरिक लगानी कोषको कतिमा खुल्यो सेयर कारोबार ?
काठमाडौं - नागरिक लगानी कोषको २२% बोनस सेयरमा मूल्य समायोजन भएको छ । बोनस समायोजनपछि लगानी कोषको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता २ हजार २५३.२८ रुपैयाँ कायम भएको छ । बिहीबार कोषको सेयर कारोबार यही मूल्यलाई आधार मानेर खुलेको छ । यसको औसत आधार मूल्य भने २ हजार ७८५.६४ रुपैयाँ छ । हाल नागरिक लगानी कोषको सेयर पुँजी ७४ करोड ३ लाख रुपैयाँ छ । बोनसपछि पुँजी ९० करोड ३१ लाख ५८ हजार २७२ रुपैयाँ पुग्नेछ ।